Interview – Mahant Thakur | Madhesi - United We Stand
Interview – Mahant Thakur
June 3, 2009 at 11:19 pm4comments
महन्थ ठाकुर परिपक्व, शालीन एवं प्रतिबद्ध लोकतन्त्रवादी नेता हुनुहुन्छ । नेपाली काङ्ग्रेसमा रहेर प्रजातन्त्रको लामो लडाईं लड्नुभएका इमानदार नेता ठाकुर उत्पीडन, अन्याय र पहिचानको सङ्कट खेपिरहेका मधेसी जनताको आशा र आस्थाका प्रतीक बन्नुभएको छ । सत्तामोह र प्रलोभनबाट टाढा ठाकुरसँग प्रस्तुत छ, सीताराम अग्रहरि, कुमार विवेकानन्द, सुरेश यादवको कुराकानीको सार सङ्क्षेपः-
सरकारमा जाने कुरामा तपाइँको पार्टीले के निर्णय गर्‍यो ? तमलोपामा दुई धार छ, अन्योल छ भनिन्छ नि ?
तमलोपामा कुनै अन्योल छैन । प्रजातान्त्रिक दलमा मतमतान्तर हुनु स्वाभाविक हो । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पनि छ तर पार्टीले सरकारमा जाने नजाने कुनै निर्णय गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनपछि हामीले छलफल गरेर निर्णय गर्नेछौँ ।
व्यक्तिगतरूपमा तपाइँको धारणा के हो ?
मैले भनिसकेँ हाम्रो पार्टी प्रजातान्त्रिक पार्टी हो । हामीले छलफल गरेर निर्णय गर्नेछौँ तर मलाई अहिलेसम्म मधेसबाट मोबाइलमा शुभकामनाका साथै सरकारमा नजान नै खबरदारी म्यासेज आएको छ ।
तर सरकारमा जानुको भिन्नै अर्थ पनि हुन्छ होइन र ? फेरि तपाइँको दलमा एक समूह यसको पक्षमा छन् भनिन्छ नि ?
दुईटै कुरा छ । सरकारमा गएपछि लाभको अवसरमा भुल्ने प्रवृत्ति पनि छ । अहिलेसम्म सरकारमा जो गएको छ कमजोर भएको छ । एमाले पनि कमजोर भएको छ, माओवादीको अवस्था पनि हेरिहाल्नुभयो ।
पहिले पनि सरकारमा तपाइँहरू नजानुभएकै हो ? तर अहिले नयाँ सरकारलाई समर्थन दिनुपर्ने आवश्यकता किन महसुस भयो त ?
एक समय हामीले माओवादीको नेतृत्वको सरकारलाई बाहिरबाटै समर्थन गरेका हौँ । पछि समर्थन फिर्ता पनि लियौँ । माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो । जनताले जनादेश दिएर पठाएकोले सरकारको नेतृत्व गर्ने उसको अधिकार थियो । अहिले सरकारका नेतृत्वकर्ता माओवादी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिनुभएकाले सरकारविहीनताको स्थिति अन्त्य गर्न नयाँ सरकारलाई समर्थन गरेका हौँ ।
संविधान निर्माणमा माओवादीको कस्तो भूमिका देख्नुहुन्छ ?
माओवादीलाई हामीले खाली नकारात्मकरूपमा हेर्न मिल्दैन । उहाँहरूको आˆनै सोच, ‘आइडियोलजी’ होला । जनगणतन्त्र पनि भनिरहनुभएको छ तर उनीहरूको सकारात्मक पक्ष पनि हेर्नुपर्छ । संविधान निर्माण प्रक्रियामा उहाँहरूको भूमिका सकारात्मक रहेको बिर्सन हुन्न ।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई कुनरूपमा लिनुभएको छ ?
प्रधानसेनापति प्रकरणमा विवादास्पद निर्णय भयो । आˆनै मन्त्रिपरिषद्मा सहमति भएन, विरोध भयो । अल्पमतमा परिएपछि त्यस विषयमा निर्णय गरियो तर उहाँ संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । संसद्मा ३०१ मत नपुर्‍याउँदासम्म उहाँ नै प्रधानमन्त्री हो । खैर आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएन भने नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभयो, त्यो राम्रो र सकारात्मक छ । जुन शालिनताका साथ राजीनामा दिनुभयो त्यस्तै किसिमले संसद् चल्न दिएर नयाँ सरकार गठन हुन दिनुपर्‍यो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वका विषयमा के भन्नुहुन्छ तपाईं ?
उहाँमा परिपक्वता र प्रतिबद्धता जुनरूपमा देखिएको थियो त्यो अनुसार चल्नुभएन । एउटा नेताको रूपमा कसैभन्दा उहाँको उचाइ कम छैन । हतियार छोडेर आउनेबित्तिकै रातारात चरित्र फेरिन सक्तैन । विस्तारै विस्तारै परिवर्तन हुन्छ । प्रधानमन्त्री भएपछि पनि उहाँको आक्रोशपूर्ण धम्कीपूर्ण भाषण आउँथ्यो । कसैले बलपूर्वक वा हतियार देखाएर सत्ताच्युत गरे बरु ठीक छ तर वैधानिक तवरले हटाउन सकिन्छ नि ।
विवादास्पद निर्णय भन्नुभयो, के सरकारले प्रधानसेनापतिलाई कारबाही गर्न सक्दैन त ?
कसैको नियुक्ति, बढुवा, कारबाही सामान्य विषय हो । सरकारले गर्न सक्छ तर अहिले उचित समय भएन । शान्ति प्रक्रियामा हामी छौँ यस्तो अवस्थामा सबैलाई सम्झाएर बुझाएर लैजानुपर्छ । फेरि प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई जतिखेर कारबाही गर्नुपथ्र्यो त्यतिखेर सरकारले कारबाही गरेन ।
प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई कारबाही गर्ने उचित समय कहिले थियो र ?
जुनबेला कटवालले संसद्ले घोषणा गरिसकेको सङ्घीयताको विरोधमा बोले, नागरिकता र सेनामा मधेसीसहितको समावेशी प्रवेश र सरकारले गरेको विविध निर्णयका विरुद्ध राजनीतिक भाषण दिए त्यतिबेला सरकारले स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही अघि बढाउनुपथ्र्याे । प्रधानसेनापतिले पनि संयमता राख्नुपर्छ, गुमाउनु ठीक भएन । सुरुदेखि नै मैले सेना र सरकारबीच द्वन्द्व हुनुहुँदैन शान्ति प्रक्रिया प्रभावित हुन्छ भन्दै आएको छु ।
सरकारको निर्णयलाई उल्टाएर राष्ट्रपतिले
नागरिक सर्वाेच्चताविपरीत गैरसंवैधानिक कार्य गरेको
आरोप लगाइएको छ । त्यस विषयमा तपाइँको दृष्टिकोण के छ ?
यो विषय अदालतको विचाराधीनमा छ । अब त्यसले गर्ने निर्णयलाई पर्खनुको विकल्प छैन । नागरिक सर्वाेच्चता भनेको व्यक्तिको सर्वाेच्चता होइन कानुन र विधिको सर्वाेच्चता हो । कानुनको नजरमा प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणसम्म सबै एक हुन्छन् । केही विषय साझा जिम्मेवारीको हुन्छ केही व्यक्तिगत । साझा जिम्मेवारी हुँदा सहमतिको आवश्यकता हुन्छ । राष्ट्रपतिको कदम जस्तो भए पनि ठूलो दुर्घटनाबाट मुलुक रोकिएको छ । सेना विभाजन हुनबाट जोगिएको छ । सेना विभाजन हुनु देशको दुर्भाग्य हो ।
यसै विषयमा सङ्कल्प प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको छ भने अदालतमा पनि मुद्दा विचाराधीन छ । संसदीय सर्वाेच्चता कि अदालत सर्वाेच्चताको पनि कुरा आएको छ नि ?
आ-आˆनो स्थानमा दुवैको महìव छ । संसद्मा राजनीतिक विवाद निरूपण हुन्छ भने अदालतमा न्यायिक निर्णय हुन्छ । कानुन र संविधानको व्याख्या गर्ने नै सर्वाेच्च अदालत हो तर सङ्कल्प प्रस्ताव परिपक्व हुन नै सात दिन लाग्छ । यदि संसद्ले सङ्कल्प प्रस्तावमाथि छलफल गर्‍यो भने अदालतको निर्णय गौण हुन्छ भने सर्वाेच्च न्यायालयको निर्णय पनि अन्य निकायका लागि बाध्यकारी हुन्छ ।
अदालत पनि परिवर्तित सन्दर्भ अनुसार परिवर्तन नभएको आरोप छ ?
सेना, प्रेस र अदालतसँग उल्झेपछि स्वाभाविक रूपमा शान्ति प्रक्रिया उल्भिmन्छ । हुनसक्छ सेना, प्रेस र अदालतमा धेरै त्रुटि कमजोरी होला तर हामीसँग जे जस्तो छ त्यसमै विश्वास गर्नुपर्‍यो । सबैमाथि अविश्वास गर्नु पनि हुँदैन । नयाँ संविधान बनिसकेपछि जे जस्तो परिवर्तनका सकारात्मक कदम चाले पनि हुन्छ ।
शान्ति प्रक्रिया अवरुद्ध हुनलागेको हो त ?
हेर्नुस्, शान्ति प्रक्रिया कुनै पनि अवस्थामा अवरुद्ध हुनुहुँदैन । निष्कर्षमा पुगेर स्थायी शान्ति कायम हुनुपर्छ । यसका लागि शान्ति प्रक्रियाका पक्षहरू एकसाथ हिँड्नुपर्छ । खासगरी माओवादी, काङ्ग्रेस र एमाले तीनै दलबीच सहमति कायम हुनुपर्छ । मधेसको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने यी तीनै दल अलग्गै हुँदा नै राम्रो हो तर देशको हिसाबले भने तीनै दल एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्छ ।
मधेसको कुरा गर्दा तपाइँमाथि विखण्डनवादीको आरोप लाग्ने गरेको छ ?
जुन आरोप ममाथि छ, त्यो आरोप सत्ताधारीमाथि पनि थियो । परिवर्तन चाहनेलाई हिजो आतङ्कवादी, राष्ट्रघाती, अराजकतावादी भनिएको हो । कुनै बेला माओवादीलाई आतङ्ककारी भनिएको थियो, जनआन्दोलनका बेला प्रजातान्त्रिक भन्ने काङ्ग्रेस एमालेलाई पनि अराष्ट्रिय तत्वजस्ता आरोप लागेकै थियो तर सत्तामा तिनीहरू आएपछि त्यो सबै आरोप धुलिगयो । प्रधानमन्त्रीसँग कुरा हुँदा मैले भनेको पनि थिएँ । कुनै बेला तपाईंमाथि आरोप थियो, अहिले ममाथि छ । मलाई जति गाली दिन्छ मधेस त्यति एकीकृत हुन्छ । त्यसैले म गाली र आलोचनाको जवाफ दिन चाहन्न ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसागको भेटमा तपाइाले के कुरा राख्नुभयो त ?
मैले प्रधानमन्त्रीलाई शान्ति प्रक्रिया चलिरहेको सन्दर्भमा कुरा राखेा । शान्ति प्रक्रिया चल्नुको अर्थ अशान्ति छ, द्वन्द्व छ । अशान्ति र द्वन्द्व किन भयो एकअर्काविरुद्ध हतियार उठायााै त्यसैले । कम्तीमा यहााको भूगोल, संस्कृति, समावेशी परिवेश, जनसङ्ख्याले के देखाइरहेको छ भने कुनै एक शक्तिले केही गर्न सक्दैन । सबैसाग मिलेर हिाडनुपर्छ । नेताहरूको भाषणमा विविधता नै मुलुकको सौन्दर्य भनिन्छ तर त्यसलाई ‘मेन्टेन’ गरिादैन । ‘मेन्टेन’ गरिएन भने कुरूप भइहाल्छ ।
मधेस मुद्दालाई सम्बोधन गर्दा देश टुक्रिन्छ भन्ने पनि एकथरिको भनाइ छ नि ?
देशको विखण्डन कसैले चाहादैन । कसैले पनि शरीरको अङ्ग काट्न चाहादैन तर शरीरको कुनै अङ्ग प्रभावित भयो भने त्यो अङ्गमा मात्र सीमित रहादैन, पूरै शरीरमा प्रभाव पर्छ । मधेसमा अलिकति उथलपुथल भयो भने देशमै उथलपुथल हुन्छ । देशले आˆनो प्रमुख अङ्ग मधेसलाई विश्वासमा लिन सकेको छैन । कस्तो विडम्बना हामी समावेश हुन चाहन्छौा । हामी न्याय चाहन्छौा तर हामीलाई अलग्याउनेहरूले नै विखण्डनवादी भन्छन् । मधेस नेपालको आर्थिक आधार मात्र होइन रेस्पेक्टेवल साइज सम्मानजनक आकार पनि हो ।
मधेस समस्या समाधानको उपाय के त ?
हामीले आन्दोलनअघि र पछि विभिन्न माग राखेका थियौा । मधेसी मोर्चासाग भएको आठबुादे सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो । राज्यको सबै तह, अङ्ग र निकायमा मधेसी समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेलगायतका उपाय छ । एउटा कुरा के बुझ्नुस् भने माओवादी आन्दोलनका क्रममा पूरा नेपाल प्रभावित भएन तर मधेस आन्दोलनमा समग्र नेपाल नै प्रभावित भयो । यस अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ कि मधेसको के स्थान छ । मधेस नेपालको ‘सˆट एवडमन’ -नरम उदार) हो भनी विदेशी विद्वानहरूले नै भनिसकेका छन् । मधेस ‘डिस्टर्व’ भए नेपाल नै ‘डिस्टर्व’ हुन्छ ।
काङ्ग्रेस छोडेर पछुतो हुने कुरा गिरिजाबाबुले भन्नुभएको थियो, कुनै पछुतो छ ?
छैन, छैन । मातृभूमिका लागि, न्याय र समानताका लागि सङ्घर्ष गर्न पाउादा झन् गौरव लागेको छ ।
Entry filed under: Uncategorized. Tags: Interview, Madhesi, terai.
Managing territorial claims	Terai-Madhes and Geo-politics
1. Durga Nath Jha | April 27, 2010 at 1:21 pm
Parnam Mosa ji
Durga Nath Jha,
196 Varun Vihar,
2. DURGA NATH JHA | March 23, 2011 at 7:35 am
i am bablu jha , KANPUR.
3. Vidyapati Thakur | May 2, 2011 at 6:49 am
Our’s honerable leader! In fevour of Madhesis plz don’t forget that we are ‘Nepali’ before beinga‘Madhesi’ so we need to look after both Nepal as well as Madhes.After only mentioning these changes you be able to beamatter of National prideness.
4. NEPALI | May 28, 2011 at 12:47 pm
Matra asa‘Madhesi’ bhayera sonchnu bhanda asawhole ‘Nepali’
bhayera pani sonche ramrai hunthyo hai.